Tag: fahamendrehana » Martech Zone
Tag: tsy fivadihana
Ireo paikady mamono ny varotra atiny # CONEX
Talata, Aogositra 21, 2018 Alarobia 22, 2018 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 3 minitra Omaly aho dia nizara ny zavatra fantatro momba ny fananganana paikady ABM ao amin'ny CONEX, fihaonambe iray any Toronto miaraka amin'i Uberflip. Androany, namoaka ny fijanonana rehetra izy ireo tamin'ny alàlan'ny fampidirana ny superstar marketing rehetra natolotry ny indostria - Jay Baer, ​​Ann Handley, Marcus Sheridan, Tamsen Webster, ary Scott Stratten mba hitonona vitsivitsy. Na izany aza, ny vibe dia tsy ny atiny mahazatra anao momba ny fomba sy ny toro-hevitra. Ny hevitro ihany, fa ny dinika androany dia be
Vetivety ny atiny, maharitra sy matoky ary tsy mivadika
Alarobia, Desambra 3, 2014 Alakamisy, Desambra 4, 2014 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 3 minitra Ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia tany ivelan'ny tanàna aho ary tsy afaka nanokana fotoana betsaka hanoratana atiny toy ny mahazatra ahy. Tsy nandroaka lahatsoratra antsasaky ny boriky aho, fantatro fa fotoanan'ny fialantsasatra ho an'ny mpamaky maro ihany koa aho ary nisafidy ny tsy hanoratra isan'andro fotsiny aho. Taorian'ny fanoratana folo taona dia izany no zavatra mahalasa adala ahy - ampahany fotsiny amin'ny fanoratana
Tsy azo atao ny data tonga lafatra
Alahady, Desambra 23, 2012 Alahady, Desambra 23, 2012 Cody Sharp
Fotoana famakiana: 2 minitra Ny marketing amin'ny vanim-potoana maoderina dia zavatra mahatsikaiky; raha toa ka mora kokoa ny manara-maso ny fampielezan-kevitra momba ny varotra an-tranonkala noho ny fampielezana nentim-paharazana, be dia be ny fampahalalana azo omena hany ka afaka mandringa ny olona amin'ny fikatsahana angona bebe kokoa sy vaovao marina 100%. Ho an'ny sasany, ny habetsaky ny fotoana voatahiry amin'ny fahafahanao mamantatra haingana ny isan'ny olona nahita ny doka an-tserasera nandritra ny volana iray dia nolavin'ny fotoana